Sunday March 18, 2018 - 09:59:15 in Wararka by Super Admin
Diyaaradan soo dhacday oo nooceedu ahaa Hellecopter waxay dowladda Maraykanka sheegeysaa in burburkeeda uu ahaa mid dabiici ah, balse aysan jirin cid saaruukh ama gantaal haleeleelay, inkastoo ay suuragal tahay in xaqiiqdu ay sidaas ka duwantahay oo diyaaraddu lala helay gantaallada garbaha laga rido.
Diyaarad kale oo la socotay diyaaradda burburtay ayaa ciidamada Maraykanka ku wargelisay burburka diyaaradda, waxaana goobta ay ku dhacday durba gaaray ciidamo huwan ah oo ka kooban Maraykan iyo malleeshiyaad Rawaafid ah.
Wasaaradda dagaalka ee Maraykanka waxay shaaca ka qaadey magacyada todobo sarkaal oo ku dhintay diyaaradan soo dhacday, waxaana dhamaantooda ay ahaayeen ciidamada qeybta ka ah duulaanka diin la dirirka ah ee Maraykanku ku joogo dalka muslimka ah ee Ciraaq.
Capt. Andreas B. O’Keeffe oo 37 sano jir ah, Capt. Christopher T. Zanetis, oo 37 sano jir ah, Christopher J. Raguso,oo 39 sano jir ah, Dashan J. Briggs, oo 30 sano jir ah, Capt. Mark K. Weber oo 29 sano jir ah, William R. Posch oo 36 sano jir ah, Staff Sgt. Iyo Carl P. Enis 31 sano jir ah, waa todobada sarkaal ee dowladda Maraykanka ay magacyadooda shaacisay.
Inkabadan 5000 oo askari ayay dowladda Maraykanka sheegtaa iney kaga suganyihiin dalka Ciraaq, kuwaas oo duulaan ku ah muslimiinta halkaas degan.